Lomano – Lalao Olympika 2016 (J.O) : vita hatreto koa ny momba an’i Estellah | NewsMada
Lomano – Lalao Olympika 2016 (J.O) : vita hatreto koa ny momba an’i Estellah
Efa nampoizina. Tsy tafakatra niatrika ny manasa-dalana amin’ny Lalao Olympika 2016, eo amin’ny taranja lomano, i Estellah, solontenantsika tokana teo amin’ny sokajy vehivavy. Tany amin’ny laharana fahenina no nisy azy teo amin’ny fifanintsanana.
Izay no vita. Taorian-dRatiarson Asaramanitra (judo) sy Ravololoniaina Elisa Vania (fibatana fonjamby), vita hatreo koa ny momba an-dRabetsara Fils Estellah, teo amin’ny taranja lomano amin’ny Lalao Olympika 2016 (J.O) mizotra amin’izao fotoana izao any Rio, Brezila.
Nifaninana ary nifanintsana teo amin’ny taranjam-pifaninanana 100 m nage libre (NL), vehivavy, i Estellah, ny alarobia 10 aogositra teo. Tany amin’ny laharana fahenina tamin’ireo mpilomano valo nifanintsana taminy izy. Namita ny fifaninanana tao anatin’ny 1’01’’11 i Estellah raha 57’’85 kosa ny namitan’ilay avy any Uruguay, Ines Remersaro Coronel, nahazo ny voalohany, ny fifanintsanana. Araka izany, tapitra hatreo ny lalan’i Estellah, tsy tafita hiatrika ny manasa-dalana ny tenany.
Ankoatra izay, raha ho an’ny kaontinanta afrikanina manokana, tafita hiatrika ny manasa-dalana ilay Angolezy, Ana Nobrega, nahazo ny laharana faharoa, namita ny fifaninanana tao anatin’ny 59’’23.
Etsy andaniny, niaka-tsehatra ihany koa ilay mpilomano malagasy iray, Ralefy Sitraka Anthony, omaly, teo amin’ny taranjam-pifaninanana 100 m papillon, lehilahy. Hotaterina anao an-gazety eto ihany ny mikasika ny vokatra amin’izany.
Mikasika ny filaharan’ireo firenena nahazo medaly volamena betsaka indrindra, mbola mitana ny lohany hatrany i Etazonia, nahazo medaly 32 ka 11 volamena, 11 volafotsy ary 10 alimo. Marihina fa teo amin’ny taranja lomano ry zareo Bekintana no tena nanjaka. Manaraka azy eo amin’ny laharana faharoa i Sina, nahazo medaly 23 ka 10 volamena, dimy volafotsy ary valo alimo. Mitana ny laharana fahatelo i Japana, nahazo medaly 18 ka ny enina amin’izany volamena, iray volafotsy ary 11 alimo.